မိမိကိုယ်ကို သိကြရဲ့လား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » မိမိကိုယ်ကို သိကြရဲ့လား
Posted by ဆန်နီနေမင်း on Dec 4, 2011 in Copy/Paste |2comments
သူငယ်ချင်းပြောတဲ့ ဟာသလေးကတော့ ဒီလိုပါ။ ” ကြက်ဥနှင့်ဘဲဥရောင်းတဲ့ အထမ်းသမားတစ်ယောက်ဟယ လမ်းမပေါ်မှာ ကြက်ဥလား? ဘဲဥလား? ဆိုပြီး အော်ဟစ်ရောင်းသွားနေတယ်တဲ့။ အဲဒါကို အဘိုကြီးတစ်ယောက်ကကြားပြီး အထမ်းသမားကို ” မင့်ကြက်ဥတွေ၊ ဘဲဥတွေရောင်းပြီး ကြက်ဥနှင့်ဘဲဥတောင် မခွဲခြားတတ်ဘူးလားလို့ အပြစ်တင်ကာ ငါပြောပြမယ် သေချာမှတ်ထားလို့ပြောပြီး ရှေးကအထမ်းထဲမှာပါတဲ့ အ၀ါရောင်သမ်းနေတဲ့ဟာက ကြက်ဥ၊ နောက်အထမ်းမှာပါတဲ့ အဖြူရောင်နဲ့ကဟာက ဘဲဥဆိုပြီး ခွဲခြားပြလိုက်ပါသတဲ့”။
စာဖတ်သူအားလုံး နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ကောင်းသောအကြံများကြံစည်နိုင်ကာ ကောင်းမှုများနဲ့သာ အချိန်ကုန်လွန်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလျက်…….။
နောက်ဆုံးပန်းတိုင်အတွက် အဆင်သင့်မဖြစ်သေးကြောင်းပါ …။
အရှင်ဘုရားရဲ့ သတိပေးတဲ့ ပို့စ် အတွက် ကျေးဇူးပါ….။